Bala umphezulu woMmandla weCone
Ukubala umphezulu wekhowuni, kufuneka wongeze indawo yesiseko sekhowuni kwindawo yaso esecaleni. (I Indawo esecaleni ligama elihle lendawo yomphezulu edibanisa isiseko kwincopho; Ngamanye amagama, yonke into ngaphandle kwesiseko.)
Ikhowuni kunye nokuphakama kwayo kunye nokuphakama kwesilayidi.
Le fomyula ilandelayo ikunika umphezulu wekhowuni.
Nantsi imvelaphi ethe kratya kummandla osecaleni:
Indawo esecaleni yecone ngunxantathu omnye oqengqelwe kwimo yekone enjengekomityi yekhephu (luhlobo lonxantathu kuphela kuba xa icabalelekile, licandelo lesangqa elinecala elingaphantsi eligobileyo). Indawo yayo yile
Ngoku ingxaki yekona:
Nanku umzobo wobungqina.
Kwindawo engaphezulu, ekuphela kwento oyifunayo kukuphakama kwesilayidi, l . Ukuphakama kwesilayidi yi-hypotenuse kanxantathu engama-30-60-90, yiyo loo nto iphindwe kabini kwiradiyo, eyenza
Ngoku fakela yonke into kwifomula yommandla wekhowuni:
Ungayichitha njani i-amlodipine
Ukufaneleka ngokubhekiselele kwi-actavis incike
xulane vs ortho evra
Eyona ndlela yokulinganisa umhlaba
utyalo-mali kwizitokhwe zeedummies